Tag: kutengesa timu chiitiko | Martech Zone
Tag: yekutengesa timu basa
Kushamwaridzana: Shandisa Network yako Kuti Uvhare Mamwe Maitiro Neiyi Hukama Intelligence Platform uye Analytics
Ivhareji yevatengi hukama manejimendi manejimendi (CRM) mhinduro ndeye yakanaka static chikuva ... dhatabhesi yekubatana, kwavo zviitiko, uye; pamwe, kumwe kusanganisa pamwe nemamwe masisitimu ayo anopa humwe hunyanzvi kana kushambadzira mikana Panguva imwecheteyo, kubatana kwese mudhatabhesi rako kune kwakasimba, kwakabatana kubatana kune vamwe vatengi uye vebhizimusi vanoita sarudzo. Uku kuwedzerwa kwewebsite yako hakuna kubatwa, hazvo. Chii chinonzi Ukama Hwenjere? Hukama njere matekinoroji ongorora yako yedata yekutaurisa data uye otomatiki gadzira hukama girafu inodiwa kune
Spiro: Proactive Sales Engagement Uchishandisa AI
Chipiri, August 25, 2020 Chitatu, Nyamavhuvhu 26, 2020 Douglas Karr
Spiro anoshandisa njere dzekunyepera kupa vatungamiriri vako vekutengesa zviito zvinonzwisisika uye vamiririri vekutengesa vanoedza kukurudzira matanho anotevera anobatsira kudzivirira mikana yakarasika uye kuwedzera kugadzirwa kwekutengesa. Spiro vatengi vanotaura zvimwe zvinoshamisa mhedzisiro, kusanganisira: Iko kugona kuunganidza kakapetwa ka16 dhata data Iko kugona kwako kana rako rekutengesa timu kusvika 30% yakawanda tarisiro mune imwechete nguva yakatarwa. Iko kugona kuvhara 20% yakawanda yekutengesa madhiri Mabhenefiti aSpiro Sanganisira Spiro